အသုံးပြုသူနှင့်စကားဝှက်အမှား iCloud | အိုင်ဖုန်းသတင်း
သင်၏ iCloud အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုတောင်းခံနေသည့် iPhone တစ်ခုကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း
Alejandro Cabrera | | iCloud, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
၎င်းသည်ယခင်အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် iOS9သို့နောက်ဆုံးအကြိမ် update လုပ်ပြီးနောက်၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသောအရာဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ဒေတာကိုအဆက်မပြတ်တောင်းခံတဲ့ iPhone တစ်ခုဟာကွင်းဆက်ထဲကိုရောက်သွားတယ် iCloud ရယူသုံးစွဲမှုအသုံးပြုသူနှင့်စကားဝှက်။ သင်သည်သင်၏ Apple ID နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်လျှင်ပင်အမှားကသင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။
iCloud input ကွင်းဆက်တွင် iPhone ရှိနေခြင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အကူအညီနီးကပ်လာသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ iCloud input ကွင်းဆက်အတွက်ဖြေရှင်းချက်ငါးခုရှိတယ်.
3 iCloud အလုပ်လုပ်နေကြောင်းစစ်ဆေးပါ
5 iPhone ကိုအရံကူး။ ပြန်ယူပါ
iCloud အထောက်အထားများထည့်သွင်းရာတွင်အမှားအယွင်းရှိနိုင်သည် ပျက်ကွက် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှု , နှင့်ဖြေရှင်းရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် iPhone ကိုပိတ်ပြီးခဏကြာမှပြန်ဖွင့်ပါ။ ၎င်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာပြီးပြfixedနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါကသင်ကြိုးစားနိုင်သောပြyouနာအတွက်အခြားဖြေရှင်းချက်များစွာကိုသင့်အားကယ်တင်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ iPhone ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ဖို့ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။
ခလုတ်ကိုဖိထားပါ သော့ခတ် / နိုး (iPhone ၏ထိပ်ဘက်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ပိုမိုခေတ်မီသောမော်ဒယ်လ်ဖြစ်ပါကလက်ျာဘက်၌) ၅ စက္ကန့်လောက်ပိတ်ထားရန်ရွေးချယ်စရာပေါ်လာသည်အထိ။
စက္ကန့် ၃၀ ခန့်ကြာပြီးသည့်နောက်မျက်နှာပြင်လုံးဝအနက်ရောင်ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။
ဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်ရန် Lock / Wake ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
iCloud ကိုမဖွင့်မှီခဏကြာလိမ့်မည်။ သင်၏ Apple ID နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုတောင်းခံနိုင်သည်၊ သူတို့ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့်နောက်တစ်ခါထပ်မံမတောင်းဆိုသင့်ပါ။
သင့် iPhone ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းပါကကြိုးစားပါ iCloud မှထွက်ပြီးနောက်ဆိုင်းအင်ဝင်ပါ။ ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
သွားပါ ချိန်ညှိချက်များ> iCloud.
နှိပ်ပါ iPhone မှဖယ်ထုတ်ပါ.
ယခုကိုနှိပ်ပါ ရဲ့ login.
သင်၏ Apple ID နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဤ iCloud ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ပြinနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ဆက်မလုပ်မီသင်စစ်ဆေးကြည့်ပါ iCloud သည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သည်.
မင်းသွားရမယ် https://www.apple.com/support/systemstatus/ သင်၏ Mac သို့မဟုတ် iPhone ပေါ်တွင်ထိုအရာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ iCloud သည်အက်ပလီကေးရှင်းဆာဗာတွင်ပြaနာရှိလျှင်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းအက်ပဲလ်ကိုပြင်ဆင်ရန်စောင့်နေခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အထက်ပါအဆင့်များမှအောင်မြင်ခြင်းမရခဲ့လျှင်၊ Apple System Status ကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်အတည်ပြုပြီးပါက၊ နောက်အဆင့်မှာ သင်၏ Apple ID စကားဝှက်ကိုပြောင်းပါ။ ၎င်းသည်ပြaနာဖြစ်သော်လည်းပြproblemနာကိုမကြာခဏဖြေရှင်းတတ်သည်။ စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏ Mac (သို့မဟုတ် Windows PC) မှစီမံရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Safari ၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ သွားပါ https://appleid.apple.com
ကလစ်နှိပ်ပါ ပြောင်းလဲမှု password ကို.
သင်၏ Apple ID ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
ရွေးပါ အီးမေးလ်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးမေးခွန်းများကိုဖြေပါ Next ကိုနှိပ်ပါ။
ကလစ်နှိပ်ပါ စကားဝှက်ကို reset.
a ရိုက်ထည့်ပါ စကားဝှက်အသစ် ထို့နောက်စကားဝှက်ကိုအတည်ပြုပါ။
ယခု သင့် iPhone ပေါ်ရှိစကားဝှက်အသစ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ မေးတဲ့အခါ ၎င်းကို iPhone မှလက်ခံပြီးပြfixနာကိုဖြေရှင်းသင့်တယ်။
iPhone ကိုအရံကူး။ ပြန်ယူပါ
အကယ်၍ iPhone သည် iCloud password ကိုဆက်တောင်းနေလျှင်၊ သင် iPhone ကိုပိတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း၊ သင်၏ iCloud စကားဝှက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အခြားရွေးချယ်မှုများကိုပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သည်၊ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ သင့် iPhone ကိုအရံကူး။ ပြန်ယူပါ.
သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် သင့် iPhone ကိုကွန်ပျူတာသို့ကူးယူပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ iCloud ကို back up လုပ်လို့မရဘူး။
သင့် iPhone ကို Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ USB ကြိုး သုံး၍ ။
ကိရိယာများကိုနှိပ်ပြီးသင့် iPhone ကိုရွေးချယ်ပါ။
အတွက်ရွေးချယ်ပါ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် backup လုပ်ပါ.
ကလစ်နှိပ်ပါ back up ယခု။
အရန်ကူးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည်အထိစောင့်ပါ (iTunes ၏ထိပ်ဆုံးတွင်အပြာရောင်တိုးတက်မှုဘားကိုတွေ့လိမ့်မည်) ။
၎င်းကိုပြီးဆုံးသောအခါသင့် iPhone ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်နိုင်သည်။
သင်၏ iPhone ကို Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါ။
ကလစ်နှိပ်ပါ ချိန်ညှိချက်များ> iPhone> iCloud.
Find my iPhone ကိုနှိပ်ပါ။
Find ငါ့ iPhone ကိုပိတ်ပါe.
သင်၏ Apple ID စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Deactivate ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏ Mac ပေါ်ရှိ iTunes ထဲသို့ပြန်သွားပါ iPhone ကို Restore လုပ်ပါ.
Restore လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပြီး restore မလုပ်ခင်သင်ဖန်တီးခဲ့သော Backup ကိုအသုံးပြုပါ။ Apple မှ iOS ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကူးယူပါ။ သင်၏ iPhone ကိုအရန်ကူးယူထားပါ။
ဤအဆင့်များထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏ device ပေါ်တွင်သင်၏ Apple ID နှင့်စကားဝှက်ကိုအမြဲတမ်းတောင်းခံနေသည့်ပြproblemနာကိုသင်ဖြေရှင်းသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iCloud » သင်၏ iCloud အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုတောင်းခံနေသည့် iPhone တစ်ခုကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း
David C ++ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မျိုး - အို၊ ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပြီးကျွန်ုပ်၏ကိရိယာအားလုံးကိုပြန်လည်သတ်မှတ်လိုက်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ iPhone 6, iPad Air နှင့် Macbook pro များတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ မပြင်ဆင်ရသေးပါ
David C ++ ကိုပြန်ပြောပါ
Alejandro Cabrera ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်းဒေးဗစ်၊ ခင်ဗျားဟာဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအဖြေ ၅ ခုကိုလုပ်ခဲ့သလား။
Alejandro Cabrera အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပဉ္စမမျိုးဆက် iPod ဖြင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ အကယ်၍ ပြPROနာသည်မတည်မငြိမ်ပါကကြည့်ရှုရန် ICLOUD SESSION ကိုပိတ်ပစ်မည့်အဆင့်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားမည်။
Appi Store နှင့် Ami သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် jailbreak ကိုမရှုံးချင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အားအဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုတည်းရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကောင့်တစ်ခုတည်း၌အခြားစက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သူကအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် pc မှ ဝင်ရောက်၍ ကျွန်ုပ်သည် icloud အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပြီးအခြားဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအဖြေတစ်ခုသိတယ်
နည်းလမ်းတစ်ခုမျှငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် (ကျွန်ုပ်၏ယခင် iPhone ကိုဤအရာ၌ပြန်ထားပြီးသောအခါ) ကို configure မပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အရန်ကူးရန်ခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကြိုဆိုသည့်သတင်းစကားကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်သော့ဖွင့်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် Apple ID မျက်နှာပြင်သို့တိုက်ရိုက်သွားသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပြtheနာဖြစ်စေသည်။
၎င်းသည်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း iCloud သို့အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ငါစာမျက်နှာတိတ်တဆိတ်မဖတ်နိုင်ဘူး။
Japan Display သည် iPhone အတွက် AMOLED မျက်နှာပြင်များပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်
Apple ရဲ့ third-party လေ့လာသုံးသပ်သူက iPhone သေးငယ်မှုသည်ကုမ္ပဏီအားကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်